Ivandry :: Niatrana ny mpitandro filaminana sy ny mpamonjy voina • AoRaha
Ivandry Niatrana ny mpitandro filaminana sy ny mpamonjy voina
Hita miatrana eny Ivandry manakaiky sy eo amin’ny manodidina ny toeram-ponenan’ny solontenan’ny Papa na ny «nonciature», izay toerana ivantanan’ny Papa Ray masina Fransoa ny mpitandro ny filaminana sy ny avy ao amin’ny sampana mpamonjy voina. Mifanelanelana mijoro eo amin’ny manodidina sy amin’ny sisin’ny tamboho ny andiana polisy sy zandary ary miaramila. Iretsy farany no efa mivonona raha sanatria misy ny loza sy ny tampoka miseho.
«Andro vitsy nialoha ny nahatongavan’ny Papa Fransoa no efa tonga teo ireo mpitandro filaminana ireo. Mampihena ny mpanao ratsy ny fisian’izy ireo eo», hoy ny andian’olona monina eny Mahatony mandalo sy mivezivezy eo akaikin’ny « Nonciature ».
Miaraka amin’ny fiara mpamono afo sy fiara mpitondra marary ny sampana mpamonjy voina mipetraka eny an-toerana. Voalaza fa tsy mbola nisy ny hain-trano na voina niseho, hatramin’ny nipetrahan’izy ireo teny.
«Nanomboka tamin’ny alakamisy 5 septambra lasa teo no nametrahana anayeto. Misahana manokana ny ao amin’ny “Nonciature” izahay raha sanatriamisy ny loza. Misy mpamonjy voina hafa kosa napetraka any an-toeran-kafa. Efa misy rano ny kamiao mpamono afo iray mipetraka eto miaraka amin’ny lehilahy dimy. Misy kamiao mpamono afo iray kosa efa natokana manaraka ny dian’ny Papa », hoy ny adzidà Rakotoarisoa, tompon’andraikitra ao amin’ny sampana mpamonjy voina.
Alim-bavaka teny Soamandrakizay :: Nanentana ny tanora handray andraikitra ny Papa Fransoa
Fitsidihana tetsy Andralanitra :: Nahavelom-panantenana an’ireo mponin’ny Akamasoa ny hafatry ny Papa